နိုင်ငံခြားသူ လူမည်း အမျိုးသမီး ၂ ဦး မှ မြန်မာ အမျိုးသမီး များ အပေါ် ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန် စော်ကား သည့် အပေါ် ကမာရွက် ရဲစခန်း ၏ တာဝန်မဲ့ လုပ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » နိုင်ငံခြားသူ လူမည်း အမျိုးသမီး ၂ ဦး မှ မြန်မာ အမျိုးသမီး များ အပေါ် ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန် စော်ကား သည့် အပေါ် ကမာရွက် ရဲစခန်း ၏ တာဝန်မဲ့ လုပ်ရပ်
နိုင်ငံခြားသူ လူမည်း အမျိုးသမီး ၂ ဦး မှ မြန်မာ အမျိုးသမီး များ အပေါ် ကိုယ်ထိ လက်ရောက် ကျူးလွန် စော်ကား သည့် အပေါ် ကမာရွက် ရဲစခန်း ၏ တာဝန်မဲ့ လုပ်ရပ်
Posted by Bayote on Jun 14, 2010 in Myanma News, News | 25 comments
so rude.Myanmar people should not highly think of foreigner.. .
အေးဗျာ မစဉ်း စား တတ် အောင် မြန် မာ ပြည် က ဖြစ် ပြက် နေ တော့ …။ ကျွန် တော် ကြုံ ဘူး တဲ့ လူမဲ တော် တော်များများ ပါ ဘီ လူး တွေ လို ဘဲ ရိုင်း ဆိုင်း လှ တာ ကို တွေ့ရတယ် နောက် ပြီးကျမ်း ဂံထဲ က ဘီလူးတွေ ဆို တာ
လဲ သူ တို့ တတွေ ကိုရည် ညွန်း ထားတာ ပါကြည့် လေ ရွှေ တိဂုဏ် ဘုရား လမ်း မ က မုက်ဝ ကို ကြည့် ဘီလူးတွေဘာ နဲ့ တူ သလဲ သွား ကြည် ကြ ပါ နော်……ဘီလူး တွေ ဝင် စီး နေ ပြီ ပေါ့…။သြော် နောက် တခု က အဖြူ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊အမဲဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အ ထင် မကြီး ဖို့ အားလုံး ကို သိစေချင် တယ်…သူ တို့ အခွင် ရေး မရှိရင် ဘာ မှ မ လုပ် တဲ့ လူ တွေ …..။
သူတို့ ဒီလောက် လက်ရဲတာ သန်းရွှေ မယားတွေလားမသိဘူး ဒါမှမဟုတ် မဲရုံစောက်ဖို့ ခေါ်ထားတာနေမှာ တွေ့ တဲလူ mp4 နဲရိုက်ပြီး youtubeတင်ပါ
လဲ သူ တို့ တတွေ ကိုရည် ညွန်း ထားတာ ပါကြည့် လေ ရွှေ တိဂုဏ် ဘုရား လမ်း မ က မုက်ဝ ကို ကြည့် ဘီလူးတွေဘာ နဲ့ တူ သလဲ သွား ကြည် ကြ ပါ နော်……ဘီလူး တွေ ဝင် စီး နေ ပြီ ပေါ့…။
we cant just say like this
there must be sth else that myanmar women did to them
remember, u need to use both of your hands to clap
i just wanna point out sth that we might miss
yes yes, they did like this because, as you all know, foreigners look down myanmar. Do you all know who made this ?
ဒါလားမြန်မာ…. ငါတို့သိတဲ့မြန်မာတွေကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး… ကို့လူမျိူးကိုအ၇မ်းချစ်ကြတာပါ…:(
သူတို့ကို ဒီလိုလွတ်လပ်စွာ လုပ်ခွင့်ပေးထားတာလား။ မြန်မာမှာလာနေပြီး ဒီလိုလုပ်ရဲတယ်ဆိုတော့ အင်း စဉ်းတော့ စဉ်းစားပဲနော်….
နောက်တစ်ခါ လမ်းမှာတွေ့ရင် ဝိုင်းရိုက်ကြအောင်လေ။
A Lin Phyu အဲဒါဆိုကျနော်တို့ကို ရဲတွေကပြန်ရိုက်မှာပေါ့
ကိုလဲလှည်းတန်းဘက်မှာခဏခဏတွေ့ ခဲ့တယ်နော် ။
ကြောက်လို့ ရဲ လုပ်တာပေါ့
ဒီလို ကိစ္စတွေက နောင်တိုင်းပြည်ဖွံဖြိုးတိုးတက် လာတာနဲ့အမျှ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရမဲ့ကိစ္စတွေပါ။
ပြည်တွင်းဝင်ရောက်မှုများလာတာနဲ့ အမျှ….သက်ဆိုင်ရာကလည်း သတိရှိရှိ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်…။
Kltatdo ရေးထားတာလေးကအတော်သဘာဝကျပါတယ် လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ တော့ ………….. အဟဲ……..ဦးတင်မောင် ပြောသလို ပြောရ/ရေးရ ရင် ကျွန်တော်လေထိုနည်း၎င်း၊ကျွန်တော်လေထိုနည်း၎င်း၊စီးပွာရေး………………ဘာညာပေါ့ဗျာ
ဒါနီကတိုးမတွေဘဲ၇ှိသေးတယ် နီကတိုးထီးတွေဆို၇င် ကိုယ့်မြန်မာမိန်းကလေးတွေ သတိထားပါ ဒီလူမျိုးတွေကစောက်ကျင့်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး မလေး၇ှားမှာဆိုလဲ နီကတိုးတွေသောင်းကျန်းလွန်းလို့အမှု့ပေါင်းစုံနဲ့ ထောင်ထဲမှာအများကြီးဘဲ ဘီယာဆိုင်တွေမှာမူး၇ူးပြီးသောင်းကျန်းတာ ၇ဲတောင်မနိုင်ဘူး ဒါ ကိုယ်တွေ့ဘဲ အစိုး၇အနေနဲ့သတိထားသင့်ပါတယ် ဒီလူမျိုးတွေကို ဒီကောင်တွေကအဓိကအလုပ်ကတော့ဘိန်းဖြူလုပ်တာများတယ် အ၇ာ၇ှိတွေနဲ့ပေါင်းလုပ်၇င်တော့မပြောတက်ဘူး မြန်မာကအ၇ာ၇ှိတွေကလဲ လဒ်စား၇တာဝါသနာပါတာကို အစိုး၇လုပ်၇ပ်တွေက ကျက်သေ၇ကိုမ၇ှိပါဘူး
ရဲကိုတိုင်တယ်ဆိုတော့ ….အင်း ရဲဆိုတာပိုက်ဆံပေးမှလိုက်တာပါ
အဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ကို လှည်းတန်း ဦးထွန်းလင်း ခြံလမ်းထဲက အင်တာနတ် ဆိုင် မှာ ခဏခဏတွေ့ ဖူးပါ
တယ်။ သူ တို့ ပုံစံတွေ က ပတ်ဝန်းကျင်ကို လုံး ၀ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ နဲ့သွားလာ ကြပါတယ် .
ပြောတာဆိုတာ တွေရော ပုံစံက တော့ ကန့် လန့် ပုံစံတွေပါ .. တခါတလေ..လူမည်း ကောင်တွေလည်း
ပါလာတတ်တာတွေ့ ပါတယ် .. ကြားဖူးတာ ကတော့အရင် ရန်ကုန် အသင်းမှာ ဘောလုံးကန်တဲ့ လူမည်း
ကောင်တွေနဲ့ပါတနာတွေ လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ် ..
အင်း ပြဿနာအိုးတွေပါလား။တာဝန်ရှိသူတွေက တာဝန်ဆိုတာကို စာလုံးပေါင်းပြန်သင်ပေးရမယ့်
သူတို့ကိုခေါ်လာတဲ့လူမည်းကောင်တွေကပြစ်သွားလို့စိတ်ကျပြီးမဲမဲမြင်ရာမဲတော့တာပါ။ ခဏဂေါက်သွားတဲ့ သဘောပေါ့။